Best 24 Atụmatụ Atụmatụ Atụmatụ Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Atụmatụ ntutu isi Uche dịgasị iche iche site na ebe ruo ebe ọzọ. E nwere okpokoro isi dị iche iche, ha nwekwara ihe ha pụtara. Echiche nke na okpokoro isi pụtara ọnwu site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu karịsịa mgbe ejiri anya anya buru ibu. Okpokoro isi nwere ike ịbata na ọtụtụ ụzọ na ha na-ejedebe na ezi ihe ị ga-ahụ n'anya. Ogbugbu okpokoro isi nwere ike ibu ihe ncheta banyere onye nwuru anwu nakwa na anyi nile kwesiri ibi ndu a n'uzo zuru ezu.
Uche nke okpokoro isi nwekwara ihe ha pụtara dịka shuga na-egbuke egbuke bụ nke a na-akpọkarị stampụ Mexico ma ọ bụ egbu egbu osisi. Dịka ọmụmaatụ, ndị Mexico na-ahụ ụbọchị igbu egbu egbu n'ihi ọrụ ọ na-etinye.
Ụmụ nwanyị na-ejikarị agba na-agbanwe ụzọ ndị mmadụ si ahụ #tattoo na nkọwa dị oke.
1. Sunflower okpokoro isi echiche igbu egbugbu maka ụmụ nwoke na ụkwụ
A na-ewerekarị okpokoro isi dịka ihe dị nsọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe dị egwu ma mgbe ọ na-abịakwute tattoos, okpokoro na-adị nnọọ iche na ihe ọtụtụ n'ime anyị na-eche. Ụfọdụ okpokoro ink dị ka ihe nnọchiteanya dị mkpa maka ihe.
2. N'elu aka nkpuchi onu ogugu maka umu nwoke
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ị ga-aza tupu ịnweta igbu onwe gị.
3. Kpoo mkpịsị uhie na-enye echiche zuru oke maka ụmụ nwoke
Ị bụ onye na-ese ụkpụrụ nke igbu egbugbu gị. Mgbe ị nwetara ụdị egbugbere ọnụ nke na-eme ka ị chepụta ma ọ bụ zaa ajụjụ gị na-anọchi anya otu echiche, ọ bụ ọrụ gị ịnweta onye na-ese ihe
4. Okpokoro isi eji aka egbu egbu echiche maka ụmụ nwoke
E nwere oge ndị ikom ahụ bụ nanị ndị na-etinye aka na akwara n'ahụ ha.
5. Ejikwa okpokoro isi akara ngosi echiche maka ụmụ okorobịa
6. Egwuregwu na-egbuke egbuke na-eme ka ụmụ nwanyị laghachi azụ
7. Atụmatụ na-egbu egbu egbu na mkpịsị ụkwụ maka aka
8. Atụmatụ echiche akara isi isi na-acha anụnụ anụnụ na ụmụ nwoke
Akụkọ ahụ agbanweela taa ka ndị nwoke na ndị inyom nwere ike iji egbu a ugbu a n'enweghị mmetụta.
9. Ọkara aka ntuchi ink akara maka ụmụ nwoke
Ogbugbu a #design nwere ike ile anya ebe a. Otú ọ dị, ọbụrụ na ịnweghị onye na-ese ihe ga-anọchite anya nke a n'ụzọ zuru oke n'ahụ gị, ọ nwere ike bụrụ ọdachi.
10. Nkume a na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke
Otutu ndi mmadu eji oge ha na ego ha na-anwa ichota onu ogugu zuru oke ka ha jiri aka oru egbu egbu mechie.
11. Jirinụ akara ọkpụkpụ aka na-egbuke egbuke echiche maka ụmụ nwoke
Ihe kacha njọ na-emetụ mgbe ndị mmadụ na-enwe ihe ọjọọ na-adịgide adịgide. Ahụmahụ ahụ bụ ihe na-ekwesịghị iche n'echiche.
12. N'akụkụ aka ekpe nke ebumpụta ụwa nke mmadụ na-egbu egbu egbu
Ụdị dị ka nke a nwere ike ịmepụta n'akụkụ ọ bụla nke ahụ. Mgbe i nwere ya na akụkụ a nke ahụ gị, ọ naghị akwụsị ịchọ mma. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta onye na - ese nkà nke ga - enyere gị aka na nhazi dị ịtụnanya
13. Na-efe efe urukurubụba Atụmatụ echiche akara azụ nke isi oche maka ndị ikom ubu
Ihe okpokoro okpokoro isi ga-abụ ihe ị chọrọ ịghọta tupu i nwee ike iji otu. Ị nwere ike ịhazi okpokoro isi okpokoro gị dị ka ụzọ ị chọrọ ka ha si dị. isi iyi
14. Biceps echiche mkpịsị ntụ ụkwụ maka ụmụ nwoke
Otú ọ dị, ọ pụtara otutu ihe ma ọ bụrụ na ị maghị. Enwere ike iji ya na-anọchite anya ike, ike na nchedo. Maka ndị na-aghaghị ịnweta ahụmahụ ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ ọnwụ, ha na-ejikarị ya eme ihe iji merie okwu ha. isi iyi
15. Eji aka ọkara aka kee skull tattoo ink echiche maka ụmụ okorobịa
Ụfọdụ ndị mmadụ na-ejikarị ya eme ihe iji gosipụta ndụ ha gara aga. O nwedịrị ike ịnọchite anya àgwà ọjọọ. isi iyi
16. Atụmatụ mkpịsị aka akara mkpịsị ụkwụ maka isi aka
Mgbe ụfọdụ, a na-eji akwara isi na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị na ihe ịrịba ama nke mmeri. Nhazi a nwere ike adọta ya na nha di iche iche. I nwedịrị ike ime ka ọ bụrụ nwanyi ma ọ bụrụ na ịchọrọ. isi iyi
17. Jirinụ mkpịsị aka akara mkpịsị aka na-egbuke egbuke maka ụmụ nwoke
Maka ụmụ nwanyị ma ọ bụ ndị nwere ike ịchọ ihe dị jụụ, okpokoro isi ha nwere ike ịdị nha. Ọ bụrụ na ị na-eche na inwe obere okpokoro isi, ị nwere ike ịga maka akụkụ nke okpokoro isi. Nke a bụ ihe ị nwere ike ime na mkpịsị aka gị, nkwonkwo ma ọ bụ n'akụkụ akụkụ aka gị. isi iyi
18. Ụcha akpụkpọ anụ mara mma maka echiche ụmụ nwanyị
Mkpịsị aka nke okpokoro isi nwere ike ịdị mma na agba ka ọbụla mee ka ọ mara mma. E nwere akụkụ dị iche iche nke ahụ ebe imewe ahụ nwere ike ime nnukwu nkwupụta ejiji. Ị nwere ike inwe ntakịrị egwu ma ọ bụrụ na ịhapụ ya nnukwu na azụ gị. isi iyi
19. Dezighachi echiche echiche tatuu ajuju maka umu nwoke
Ojiji nke okpokoro isi aghọwo ihe a na-ewu ewu nke na ọbụna ụmụ nwanyị na-eji ndị egwu. Ozi nke okpokoro isi ndị a ga-adabere na onye ọ bụla n'imebatara imewe ahụ. isi iyi
20. Uhie bilie na mkpịsị isi nke mkpịsị ụkwụ maka echiche ụmụ agbọghọ
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ pụtaghị ihe dị ukwuu na onye ọrụ ma e wezụga ngwa ngwa ejiji na ahụ. Ịnwere ike ịgbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na egbugbu okpokoro gị iji mee ka ọ dị iche ma nye ya ozi dị iche. isi iyi
21. Ụdị isi akara mkpịsị ụkwụ nke ink echiche maka ubu nwoke
Ọmarịcha akwara mgbochi isi bụ ihe dị iche iche nke dị na ha. isi iyi
22. Ihe okike na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke n'elu akpa nwa agbọghọ ahụ
Akụkụ nke ahu nke ịchọrọ iji mee ihe kwesiri iji nlezianya tụlee ya n'ihi na nke ahụ ga-achọpụta ma obere egbu ma ọ bụ nnukwu egbu egbu gị ga-adị. isi iyi
23. N'okpuru nkata isi ihe eji egbu egbu maka umu nwanyi
Ịnwere ike igbanwe ihe okike ndị a ka ha bụrụ ndị na-adọrọ adọrọ mgbe ị dọtara ha azụ. Ịnwere ike ịmeziwanye onyinyo gị site na ịpị nnukwu egbugbere ọnụ n'elu ahụ gị. isi iyi
24. Uwe oyi, ntupu ink na-egbu egbu maka ụmụ nwoke
Mgbe ị nwere ezigbo onye na-egbu egbu egbugbu, ọrụ gị ọkara ọkara, na mgbe egbugbu na-adọrọ adọrọ ma dị mma, ọrụ ahụ ezuola. isi iyi
Ọzọ 12 Atụmatụ Atụmatụ Maka Ụmụ Nwaanyị
akwara obiụmụnne mgbuNtuba ntugharinnụnụụkwụ akarip tattoosechiche egbugbuegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu hennandị na-egbuke egbukeaka mma akaỤdị ekpomkpaenyi kacha mma enyiakara ntụpọọdụm ọdụmokpueze okpuezedi na nwunyezodiac akara akaraegbu egbu mmirin'olu olukoi ika tattooagbụrụ eboakpị akpịegbu egbu ebighi ebiima ima mmana-egbu egbuudara okooko osisienyí egbu egbungwusi pusiGeometric Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbuarịlịka arịlịkaAnkle Tattoosazụ azụaka akandị mmụọ oziUche obiegbu egbu osisi lotusEgwu ugona-adọ aka mmaegbu egbu egbuegbu egbu diamondọnwa tattoosaka akaegbu egbu okpumma tattoosmehndi imeweegwu egwuegbugbu egbugbu